Ururka Iskaashiga Islaamka oo Jabuuti ku taageeray ololaheeda kursiga Qaramada Midoobey – XAMAR POST
Ururka Iskaashiga Islaamka oo Jabuuti ku taageeray ololaheeda kursiga Qaramada Midoobey
Ururka Iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa u ballanqaaday dowladda Jabuuti in ay ku taageeri doonaan kursiga aan joogtada ahayn ee Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey.
War uu soo saaray Ururka waxaa uu Waddamada Islaamka ah ee xubnaha ka ah Ururuka kaga codsaday in ay garab istaagaan dowladda Jabuuti oo tartan ugu jirta Kursiga aan joogtada ahayn ee Golaha amaanka.
Dowladda Kenya oo Jabuuti kula tartameysa Kursigan ayaa waxaa ay taageero ka heysataa inta badan Waddamada Midowga Afrika.
Waddamada Aasiya iyo Latin America ayaa ah kuwa ay ku tartami doonaan codadkooda maaddaama Afrika inteeda badan iyo qaar ka mid ah Waddamada Yurub ay taageerayaan Kenya.
Waddamada Mareykanka, China, Japan iyo kuwo kale ayaa sidoo kale taageeraya dowladda Jabuuti maaddaama ay saldhig Milatari ku leeyihiin.
Waddamada ku jira Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa waxaa ay ka koobanyihiin 57 Dowladood,waxaa sidoo kale u dheer waddamada Reer Galbeedka sida France, Germany iyo kuwo kale oo reer Yurub ah oo ay Jabuuti saaxiib la tahay.
Labada Waddan ayaa kursigan ku tartami doona Bisha September ee soo socota marka uu furmo shirweynaha Guud ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobey.